citizens bank international(citizens bank international) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
विषम परिस्थितिमा पनि नाफा बढायो सिटिजन्सले, एनपीएलमा पनि सुधार
काठमाण्डौ । तरलता संकट, अत्यासलाग्दो गरी बिग्रिएको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र लगायतले देशभित्र व्यवसायिक वातावरण बिग्रिदा पनि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमीटेडले भने नाफा बढाएको छ । बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा यस्तो अवस्था देखिएको हो । खूद नाफा मात्र नभई बैंकले केही महत्वपूर्ण...
सिटिजन्स बैंकद्वारा १६% लाभांश पारित, चुक्तापूँजी १४.२ अर्ब पुग्यो
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको १५ औं वार्षिक साधारणसभाले १६ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा कात्तिक १६ गते मंगलबार नारायणहिटीपथस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवनमा सम्पन्न १५ औं साधारणसभाले संचालक समितिबाट गएको १६ प्रतिशत लाभांश वितरण सम्बन्धी...
एनएमबी र सिटिजन्सले पनि तोके नयाँ ब्याजदर
काठमाण्डौ । नेपाल राष्टबैंकको निर्देशनपछि एनएमबी बैंक र सिटिजन्स बैंकले पनि नयाँ ब्याजदर तोकेका छन् । एनएमबी बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपतर्फ सबै अवधिको प्रडक्टको अधिकतम ब्याजदर ९.३६ प्रतिशत तोकेको छ । यस्तै, संस्थागततर्फको सबै खालको निक्षेपको ब्याजदर ८.३६ प्रतिशत तोकेको छ । बचतमा अधिकतम ६.५७ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ...
आगन्तुक रिसोर्टको सेवामा सिटिजन्सका कर्मचारी र ग्राहकले विशेष छुट पाउने
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमीटेड र बनेपा काभ्रेस्थित आगन्तुक रिसोर्ट प्रालिबीच सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौता पश्चात सिटिजन्स बैंकका मोबाइल बैकिङ्ग ग्राहक, डेबिट/क्रेडिट कार्डवाहक एवम् कर्मचारीहरुले आगन्तुक रिसोर्ट प्रालिको बिभिन्न सेवाहरुमा बिशेष छुट पाउनेछन् । यस किसिमको...
यी हुन् सिटिजन्स बैंक लुट्ने नकाबधारी, सार्वजनिक भयो यस्तो भिडियो
विराटनगर । भारतीय लुटेराहरुको एक समूहले मोरङको धनपालथान गाउँपालिकास्थित कर्सिया बजारमा रहेको सिटिजन्स बैंकको शाखामा सोमबार दिउँसो करिब २२ लाख रुपैयाँ लुटपाट गरेका छन् । दिउँसो करिब साढे ३ बजे २ वटा मोटरसाइकलमा आएका ६ जना बन्दुकधारी लुटेराको समूहले लुटपाट गरेको हो । लुटपाटअघि नकाबधारी सो समूहले पेस्तोलबाट बैंकका सुर�...
एउटा वाणिज्य बैंक, जो तरलता संकटमा पनि अरुलाई पैसा बाँडिरहेको छ !
काठमाण्डौ । कर्जाको उच्च माग, तर त्यसको तुलनामा स्रोतको अभावका कारण देशका अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु अहिले तरलता संकटको भूमरी परेका छन् । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले माग भएको कर्जा प्रवाह गर्न त सकेका छैनन् नै नियामकीय व्यवस्थाअनुसारको तरलताको व्यवस्थापन गर्न समेत राष्ट्रबैंकसँग हारगुहार गर्नु परिरहेको छ । यसैको परिणामस्वरुप मंगलबार...
कोभिडले छेकेन सिटिजन्स बैंकको प्रगति यात्रा, १४.३६% सम्म लाभांश बाँड्नसक्ने
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आफ्ना सेयरधनीलाई १४.३६ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्नसक्ने देखिएको छ । कोभिड महामारीका बीच बैंकले कतिपय सूचकहरुमा राम्रो प्रगति गर्दै आफ्नो लाभांश क्षमतालाई दोहोरो अंकमै कायम गराउने सफलता पाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बैंकको कुल वितरणयोग्य मुनाफा १...
सिटिजन्स बैंकमा सिर्जना फाइनान्स गाभियो, एकीकृत कारोबार सुरु
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले नेपाल राष्ट्रबैंकबाट “ग” वर्गको इजाजतप्राप्त, बिराटनगरमा प्रधान कार्यालय रहेको सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैंक तथा कम्पनी रजिष्ट्रारकोे कार्यालयको स्वीकृति पश्चात प्राप्ति गरी शनिवारदेखि एकीकृत कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड र...
एक्वीजिसनमा सिटिजन्स बैंक आक्रामक: सिर्जनासँग अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर, चालु आ.ब.भित्रै संयुक्त कारोबार थाल्ने
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ग” वर्गको इजाजत प्राप्त, बिराटनगरमा प्रधान कार्यालय रहेको सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने गरी मंगलबार उक्त कम्पनीसँग अन्तिम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । जेठ ११ गते सिटिजन्स बैंकको तर्फबाट संचालक तथा मर्जर तथा प्राप्ति समितिका संयोजक...
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको स्वतन्त्र संचालकमा अनिल ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् । बैंकको २०७८ साल जेठ ४ गते मंगलबार बसेको ३६२ औं सञ्चालक समितिको बैठकले बैंकिंग क्षेत्रमा करिब साढे तीन दशक लामो अनुभव भएका अनिल ज्ञवालीलाई आषाढ १ गते देखि लागू हुने गरी बैंकको स्वतन्त्र संचालकमा नियुक्त गरेको हो । सुदेश खालिङले...
काठमाण्डौ । नयाँ जमानाको नयाँ भुक्तानी प्रणाली र डिजीटल दुनियाँलाई बुझ्न नयाँ पुस्तालाई जति सजिलो छ, पुरानो पुस्तालाई उत्तिकै कठीन पनि । आधुनिक युगको डिजीटल भुक्तानी प्रणाली तथा सूचनाका नयाँ प्लेटफर्महरुमा अभ्यस्त नहुने व्यक्ति समाज तथा समूहमा एक्लो हुनुपर्ने बाध्यता समेत रहेका कारण कठीनताका बाबजुद पुरानो पुस्ता पनि पछिल्लो समय...
सिटिजन्स बैंकको लाभांश क्षमता १५% बढी हुनसक्ने, अधिकांश सूचकमा लोभलाग्दो प्रगति
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमीटेडले कोरोना कहरका बीच खूद नाफा र वितरणयोग्य मुनाफामा लोभलाग्दो प्रगति गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म बैंकले गरेको प्रगति चौथो त्रैमाससम्म पनि निरन्तर रह्यो भने यो बैंकले यो वर्ष १५ प्रतिशतभन्दा माथि लाभांश वितरण गर्नसक्ने क्षमता बनाउने देखिएको छ । बैंकले चालु आर्थिक...
तिनाउमिसनलाई गाभेर सिटिजन्स बैंकद्वारा एकीकृत कारोबार सुरु, कत्रो भयो बैंक ?
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेर चैत १४ गते शनिवारदेखि एकीकृत कारोबार थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ख” वर्गको इजाजत प्राप्त, बुटवलमा प्रधान कार्यालय रहेको तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैंक तथा कम्पनी रजिष्ट्रारकोे कार्यालयको स्वीकृति पश्चात...
अपडेट: साना संस्था प्राप्तिमा सिटिजन्स बैंक आक्रामक, सिर्जना फाइनान्ससँग मर्जर सम्झौता
काठमाण्डौ । क्षेत्रीय स्तरका बित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गरी ठूलो बन्ने रणनीतिमा रहेको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले सिर्जना फाइनान्सलाई पनि प्राप्ति गर्ने भएको छ । सनराइज बैंकसँगको प्राप्ति प्रक्रिया भाँडिएपछि बिलखबन्दमा परेको सिर्जना फाइनान्सलाई सिटिजन्स बैंकले प्राप्तिको सम्झौता गरेको हो । सिटिजन्स बैंक पछिल्लो समय साना...